Ukubuyekeza: "Tamoxifen" sawo esiningi kanye imithi. Kusebenta kanye nemiphumela engemihle, "Tamoxifen"
Kusho "Tamoxifen" - kuyinto anti-estrogen, a nonsteroidal anti-isimila izidakamizwa itholakala amaphilisi (ngezinye izikhathi camera). I asebenzayo izidakamizwa - citrate tamoxifen.
Injongo eyinhloko izidakamizwa
Inkomba esiyinhloko ukusetshenziswa ukwelashwa kuyinto umdlavuza webele. Ukulungiselela "Tamoxifen" kuvimbela ukuthuthukiswa izimila, futhi ikhono ukuvimba i-estrogen agcinwe emzimbeni amasonto, ngisho nangemva isicelo esisodwa. Umuthi okuye kwaba uqobo kahle ekulweni nenzalo zesifazane. izidakamizwa "Tamoxifen" kusebenza futhi amadoda: Izibuyekezo ukuphakamisa ukusebenza yayo ekwelapheni umdlavuza wendlala nomdlavuza wamabele. Umuthi ngazithola ekwelapheni nezinye izinhlobo izimila abulalayo: umdlavuza izinso kanye wesibeletho, i-melanoma futhi ethambile izicubu sarcomas.
Kanjani nganoma iziphi isikhungo sokwelapha, kunemibono ehlukene mayelana izidakamizwa "tamoxifen". Futhi izidakamizwa ufanelwe ukuyihlola eduze kakhudlwana.
"Tamoxifen" amaphilisi in Oncology
Sekuyisikhathi eside ososayensi esungulwe kwencika estrogenic kohlobo oluthile umdlavuza webele. Lokhu kusengaphambili futhi ukusetshenziswa anti-estrogens ekwelapheni lesi sifo. Njengoba kufakazelwa izibuyekezo eziningi, "Tamoxifen", mhlawumbe - isidakamizwa ezivamile asetshenziswe ngalezi zinhloso. Kwamenywa izifundo zikufakazela nokusebenza ngendlela ephakeme kakhulu, futhi kuzo zonke izigaba umdlavuza. Futhi ukuvumela ososayensi ezivela emazweni ahlukahlukene kuleli mpikiswano ngosuku ngemithamo kahle imithi isikhathi ukusetshenziswa kwaso, iningi odokotela esimweni yomdlavuza webele ngokuqiniseka linqume iziguli zabo amaphilisi "Tamoxifen". Ngemva Yiqiniso zomuthi, nganoma yimuphi nesigaba lesi sifo isetshenziswa, ngokuvamile baphawula izinguquko ezinhle: ngokuya ku ukuthethelelwa, inani uyahluleka uma elwa nokuphuza, futhi yehlise lokufa kweziguli is kakhulu ziyancipha.
Nokho, ukusetshenziswa okuqhubekayo zomuthi igcwele eziningi side imiphumela, abesabekayo iningi okuyinto izigameko anda lomdlavuza endometrial. Noma kunjalo, izinzuzo izindlela zokwelapha "Tamoxifen kaningi ngaphezu kwamaminithi bokwenza zayo, futhi amathuba umdlavuza endometrial lingaphansi ngokuphindwe kayishumi ingozi contralateral umdlavuza webele.
Izidakamizwa "tamoxifen" sawo esiningi, ukubuyekezwa
Ngenxa wesenzo anti-estrogen kusho "Tamoxifen" iye yasetshenziswa inkambu ezingalindelekile - sawo esiningi. Reception "ewa" ejenti steroid kungaholela ukunqwabelana okukhulu egazini labo le-hormone zesifazane - estrogen. Kulokhu, umzimba we-bodybuilder Kancane kancane uqala ukulahlekelwa ukuma wesilisa, potency encishisiwe, ezikhulayo amabele (gynecomastia). Izidakamizwa "tamoxifen" ngoba amadoda - siyindlela enhle ukusiza ukubhekana ne imiphumela emibi kwezidakamizwa. Leli thuluzi ngokwako akusona kunciphisa amazinga egazi-estrogen, kodwa kuvimbela imiphumela eyingozi empilweni yabantu. Umuthi, ngenxa imiphumela yayo eziyinkimbinkimbi emzimbeni, kwandisa ukukhiqizwa hormone wesilisa - testosterone, okuyinto kuvimbela nesenzakalo obengeziwe gynecomastia. Njengoba kufakazelwa izibuyekezo eziningi zamadoda, "Tamoxifen" kakhulu ngcono potency yabo, yize ke lancipha. Buhle le ndlela Kuyaphawuleka ukuthi kusiza Ukuhoxiswa uketshezi emzimbeni, ukubambezeleka okuyinto kubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa. For bodybuilders iningi izidakamizwa "Tamoxifen" - kungcono a anti-estrogen enkulu etholakalayo hhayi eqolo.
Kodwa kunjalo elula cha. Tablets kuvuse hormone inqubo somzimba eziyinkimbinkimbi kakhulu, sandla okwandisa inani omunye owesifazane i-hormone yokwamukela - progesterone, kanye nomphumela omubi ezithinta ukukhiqizwa ukukhula isici. Ngakho-ke, ukusetshenziswa 'Tamoxifen "kusho izingcingo indlela onokwethenjelwa futhi abaqaphe kakhulu, kanye inhlanganisela ezihlakaniphile neminye imithi.
Ezinye izici zomuthi
Ngakho okuhle noma ukulungiselela ezimbi "Tamoxifen"? Izibuyekezo iziguli imithi ngokuvamile omuhle emvelweni: kwaphela iminyaka eminingi uhlulekile ukufakazela ekulenzeni libe namandla ekulweni izimila. Kodwa imithi enobuthi kakhulu, futhi umphumela wawo isimiso sokugaya ukudla bungene ngokuvamile alivumi. Ngokudlala kwemicabango ivuswe falling esesuthi ukukhula komzimba, imakwe nesicanucanu ukuqunjelwa, ukuhlanza, ukukhishwa yisisu, ukuqunjelwa, futhi ubuhlungu esiswini. Ngezikhathi ezithile kukhona izinkinga esibindini - ezifana kokuziphatha yayo kanye ne-hepatitis.
Ukusebenzisa izidakamizwa e zabesifazane abangela Izibuyekezo okuxubile: "Tamoxifen" is kabanzi futhi asebenzisa ngayo ngokuphumelelayo ekulweni ukungazali, kungenzeka ibangelwa nge-ovulation unscheduled. Ngakho-ke, ngo-inqubo ukuthatha amaphilisi lady ne kokuhlolisisa kufanele aphathelane inzalo. Lokhu kusho ukuthi nazo zingase zibangele kuyacasula pruritus endaweni zangasese, lesizalo ukopha, khulula lwesitho sangasese sowesifazane izimila ubuhlungu ngisho fibrosis.
Izidakamizwa "Tamoxifen": igazi amehlo
Injongo isiguli kudinga izindlela sina wokuhlola owandulelayo nesineke. Ikakhulukazi, udinga kakhulu segazi, ukulawula i-hemoglobin futhi amazinga cholesterol ephelele. "Tamoxifen" Tablets bangase Nokho ukuyithukuthelisa nesenzakalo amahlule, lapho isetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne nezinye izidakamizwa ezithinta igazi, is hhayi ngaphandle umthamo ukulungiswa. Phakathi lonke inqubo yokwelashwa kubalulekile njalo ukuqapha ezingeni izinhlayiyana zegazi.
On the ingxenye opticians futhi ungakwazi ulalele Izibuyekezo ezingezinhle. "Tamoxifen" ukusetshenziswa eside inomphumela omubi phezu iso: kukhona izimo ukuwohloka ezibucayi umbono, retinopathy, ingaphazamisi corneal, kungenzeka, ngisho nokubonakala kokungqubuzana ulwelwesi esweni. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba imithi oyinikiwe liyadingeka wokuhlola ngokucophelela nge kudokotela wezifo zamehlo, bese kokuthintana njalo ngesikhathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
Ithonya Lako kwezempilo jikelele
Ngaphandle kwalabo sekuphawuliwe, amaphilisi "Tamoxifen" lugcwele ngisho inani elikhulu izimpawu engathandeki. Isiguli akufanele kube usabile zezinkinga kunokwenzeka: akudingekile ukuthi okungenani ezinye zezimpawu nokubonisa kusuka kuye. Namanje, qaphela ukuthi ngezinye izikhathi ngenkathi ngokuthatha izidakamizwa angase okucindezeleka. Ezinye iziguli zizizwe ikhanda nesiyezi babonakala kwezinye izimo of myasthenia gravis. Ezinye iziguli bakhalaza ukozela ngokweqile kanye ukukhathala, futhi ukudideka uyalandelwa. Odokotela batusa kakhulu ukuthi iziguli ukuthatha izidakamizwa ngesikhathi ngokucophelela okukhulu ngenkathi ushayela futhi ngesikhathi ukusebenza nge amasu eziyinkimbinkimbi. Izidakamizwa "tamoxifen" ngoba amadoda kungaholela ekudumazekeni nasekuphileni yangasese nakuba, njengoba umthetho, it has a nethonya elihle potency, kodwa kuyenzeka futhi okuphambene nalokho. Futhi amanye amadoda kwadingeka ukuba uqaphele izinkinga oluvelayo libido.
Izidakamizwa "Izibuyekezo Vero Tamoxifen '
Ukulungiselela "Vero Tamoxifen» (Vero-Tamoxifen) - khambi yasekhaya ekhiqizwa ka "Verofarm"; isithako - tamoxifen. I nomuthi "Vero Tamoxifen" njengoba Analogue angaphandle esetshenziswa ekwelashweni kwe-umdlavuza etiologies ehlukahlukene. Imithamo, lapho uya khona, isikhathi imithi is fully umkhuba ezifanayo imikhiqizo yokungenisa efanele futhi unike imiphumela efanayo. Maye! Ziyakwazi ncamashi Izimo esifanayo, side effects kanye izikhalazo zeziguli ngayo.
Ukulungiselela "Tamoxifen" ( "Vero Tamoxifen") alinakunikezwa ngalesi hypersensitivity kuya izidakamizwa, e-Ngaphakathi mo of khulelwa futhi ngesikhathi ukuncelisa. Ngekusetjentiswa ngokucophelela yezifo iso (cataract), hyperlipidemia futhi leukopenia. Lena engathandeki imithi hypercalcemia futhi thrombocytopenia, uzwakalise thrombophlebitis nezifo thromboembolic.
Ngakho, zama ahlanganise ke, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo eziningi. "Tamoxifen" Ngokuqinisekile - imithi ezibalulekile, esebenza kahle, wayeseyitholile wakwazi ukulondoloza ukuphila kwezigidi zabantu. Ngesikhathi esifanayo, lo mkhiqizo has inani elikhulu izenzakalo engathandeki ezingezinhle. Nquma ukuthi zinkulu lapho usebenzisa lolu izidakamizwa, imiphumela noma izingozi, can kuphela onekhono kakhulu. Izidakamizwa "Tamoxifen" - lokhu akuyona neze indlela zokuzelapha, thatha kuphela ngaphansi kweso kudokotela onolwazi oluthé. umsebenzi A lesiguli - ukuthemba nodokotela wakho futhi ngokucophelela zonke iziqondiso zakhe.
Proctosedyl (ikhandlela): yokusetshenziswa
Izinkomba, side effects kanye zokuqaleka: "Rinofluimutsil"
"Rimantadine-STI" - isizukulwane esisha namagciwane
Isikhumba 'Aevit' emakhulwini izifo kuthanda
"Viferon" (wamafutha): imfundo. Wamafutha "Viferon": ukubuyekezwa, intengo
Uhlaziyo ezijulile enkondlweni. Balmont "Verbless"
Pike umsila - ukuthi kungakanani okwaziyo mayelana lesi sitshalo?!
Indlela ukugcina mimosa eside - ebukekayo kancane imbali ephuzi
Ikhekhe ngaphandle baking cookies, wangiphakamisa!
Commercial Bank. Imisebenzi kanye nemisebenzi eyisisekelo
Prototype: ukudlula-sci-fi Thriller
Sakhiwo ukuqeqeshwa: isihloko, inhloso, izindlela kanye nezinhloso. ukuqeqeshwa Lebhizinisi
"Mosquito ekhaleni ngeke buthaka": phraseologism value, umsuka walo
Yini esikhundleni imayonnaise? Yini esikhundleni imayonnaise e isaladi? Thola ukuthi ungasetha kanjani esikhundleni imayonnaise ekudleni
Vasily Ebumnyameni 2: Phakathi nokubusa, Biography